Rooney Oo Rajaynaya In Angel Di Maria Uu Ka Soo Kabsan Doono Qaab Ciyaareedka Liitay Ee Uu Soo Bandhigayay Kulamadii Ugu Danbeeyay
March 2, 2015 in Sports. by ibro.
Kabtanka kooxda Man United ee Wayne Rooney ayaa garawsaday ama aqbalay in qaab ciyaareedka xidiga ay isku kooxda yihiin ee Angel Di Maria uu yahay mid niyad jableh, wuxuuna rajaynayaa in Di Maria uu ka soo kabsan doono dhibaatada uu hadda ku jiro.
Kadib markii uu qaab ciyaareed aad u liita soo bandhigay qaybtii hore ee kulankii Old Traffrod ku dhex maray kooxa Man United iyo Sunderland ayuu Van Gaal go’aansaday inuu Di Maria badalo waqtiga nasashada, wuxuuna markii ay ciyaartaasi dhamaatay Van Gaal difaacay inuu Di Maria waqtiga nasashada soo badalay isaga oo sheegay in go’aankiisu guulaystay.
Di Maria oo lacag rekoodh jabis ah xagaagii hore ugu soo biiray Man United ayaa kulanka Sunderland lagu soo badalay da’yarka Adnan Januzaj kaas oo Di Maria ka saamayn badnaaday.
Rooney ayaa yidhi: “Qaab ciyaareedka uu Di Maria ku jiraa waa xaalad uu ciyaartoy kastaaba maro. Waa ciyaartoy fiican, wuxuuna muujiyay in aanu tayatiisa habeen kaliya ku lumin karin.Waxaan rajaynayaa inuu qaab ciyaareedkiisa ugu fiican dib u heli doono isla markaana uu wax fiican na siin doono. Khibrad fiican ayuu leeyahay waxaanan filayaa inuu xaaladan ka bixi doono”.
Rooney oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Wax ka xumi ma jirto marha qofkastaaba uu adiga ku fiirinayo ama uu ku eegayo, waa inaad sida aad adigu doonayso uga baxdaa, waanan hubaa inuu wax fiican na siin doono hadda ilaa dhamaadka xili ciyaareedka”.
Kadib markii uu Van Gaal kabtankiisa dib ugu soo celiyay safka hore ee weerarka United ayuu Rooney kooxdiisa labada gool ee ay Sunderland guusha kaga gaadhay u dhaliyay, waxaana Rooney la waydiiyay in qayb ka mid ah jamaahiirta Man United ay kulankii Sunderland tababare Van Gaal ku qayliyeen.
Rooney ayaa ku jawaabay: “Anigu waxaan filayaa in arintaasi ay tahay wax iska caadi ah, jamaahiirta halkan joogtaa markasta waa kuwo fiican, waxayna naga doonayaan inaan fursad kasta oo aan helno aan weerar qaadno, laakiin waqti kasta taasi ma dhacayso”. Man United oo xili ciyaareedkan ka maqnayd Champions Leaque-ga ayaa tartan xoogan kala kulmaysa kooxaha Arsenal iyo Liverpool.